Soo dejisan KakaoTalk 3.0.10.2387 – Windows – Vessoft
KakaoTalk – software ah ee isgaarsiinta caalamka oo dhan la saaxiibo. KakaoTalk kuu ogolaanayaa inaad fariimo ay isdhaafsadaan karto telefoon ama baaqyo kooxda. Software waxuu u soo dirto maqal ah ama video files, sawirada iyo dokumentiyo kala duwan ee tirada badan oo. KakaoTalk taageertaa .Wadashaqayntaas liiska xidhiidhka iyo goobaha software u dhexeeya aad qalab iyo computer. Software ka kooban yahay hab qufulka kaas oo bixiya ilaalinta si CHAT oo ah by sirta ah a. KakaoTalk sidoo kale u saamaxaaya in ay bedesho font qoraalka iyo Customize style ama hufnaanta sanduuqa wada hadal ah.
Fariin iyo is-dhaafsiga file
Wicitaanada kooxda Personal iyo
In la difaaco chat ee ay sir ah